We.com.mm - ချစ်ရတဲ့ချစ်သူအတွက် ထမင်းဘူးလေးပြင်ပေးမယ်။
ဟင်းမချက်တက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေအတွက်ပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတော်တော်များများက ဟင်းမချက်တက်ကြပါဘူး။ ဒီလိုဟင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ မချက်တတ်တဲ့ အတွက် တစ်ခါတစ်လေသူတို့ရဲ့ ချစ်သူအတွက်သိမ်ငယ်ရပါတယ်။ ဒီတော့အခုလိုမသိမ်ငယ်ရအောင် လွယ်ကူရိုးရှင်းလှပတဲ့ ထမင်းဘူးလေးကို ပြင်ဆင်ပုံပြင်ဆင်နည်းနဲ့ ပြောပြပေးပါမယ်။
ဒီတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နည်းတွေကတော့
၁. ရေညှိ ၃ ချပ်ကို မီးကင်ထားပါ။ ရေညှိအနည်းငယ်ပျော့သွားရင်ရပါပြီ။ ရေညှိတွေပျော့သွားပြီဆိုရင် ကြိတ်စက်ထဲသို့ ရေညှိရယ်၊ နှမ်းရယ်၊ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ကြိတ်လိုက်ပါ။
၂. ဘဲဥ (၁ လုံး) ကိုပြုတ်ထားပါ။
၃. ကြက်ဥချောင်း အသားလုံးလေးတွေကို ကြော်ထားပါ။
၄. စေးပိုင်နေတဲ့ ထမင်းကို အလုံးလေးလုံးပြီး ဆီအနည်းနည်းငယ် ထည့်ထားတဲ့ အိုးပေါ်မှာနည်းနည်းလေးပြားသွားအောင် အထက်အောက်လှန်ပြီးကြော်ပေးပါ။
ဒီလိုလေးတွေလုပ်ပြီးပြီးဆိုရင် ထမင်းဘူးထဲသို့ ဆလပ်ရွက် အရင်ခင်းလိုက်ပါ။ ဆလပ်ရွက်အပေါ်ကနေ ထမင်းကိုတင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ထမင်းအပေါ်ကနေ ငရုပ်ဆီအနှစ်လေးဆမ်းလိုက်ပါ။ ဆမ်းပြီးပြီဆိုရင် ရေညှိအမှုန့်လေးတွေကို ဖြူးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကြော်ထားတဲ့ ကြက်ဥချောင်း အသားလုံးလေးတွေကို ဘေးကနေ လှပအောင်သင့်တော်သလိုထည့်လိုက်ရုံနဲ့ ရပါပြီ။
ဒီလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ထမင်းဘူးလေးကို သင့်ချစ်သူကိုပေးလိုက်ရင် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေမှာပါ။ ချစ်သူအတွက်လည်း ထူးခြားတဲ့ ထမင်းဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပျော်ရွှင်ကြည်နူးမိနေမှာပါ။
Baby Corn ချိုချဉ်စပ်ကြော်
ခံတွင်းတွေ့ ထမင်းမြိန်မယ့် ငါးခေါင်းငပိထောင်း
အရသာရှိလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ Cake လုပ်စားမယ်
သင့်အသားအရေကို အိုမင်းရင့်ရော်စေတဲ့ အစားအစာများ